Wood Stretcher Frame | Galeriana ROYI ART
Maherin'ny 10, 000 metatra ny atrikasa ho an'ny tsenambarotra lehibe, ny zotra, ny mpividy fanafarana, ny fivarotana matihanina matihanina hanomezana tolotra famokarana baran-tsoavaly isan-karazany. Mandefa rindrina vita amin'ny hazo maherin'ny iray tapitrisa isika isan-taona mankany Etazonia, Kanada, Australia, UK ary Alemana.
Ny rindrina vita amin'ny hazandrano vita amin'ny rantsan-kitay vita amin'ny rantsantanana ho an'ny pirinty kanvas, namboarina avy amin'ny kesika amin'ny fambolena hazo syika, dia nofatoran'ny mpiasan'ny traikefa isika — ary samy efa natao talantalana daholo izy ireo ary vonona ho amin'ny kanadiana. Ho fanampin'ny haben'ny fenitra 60, afaka manao rindran-tsary fanamboarana canvas feno izahay.
Angonina ho mora ampiasaina
Alefanay daholo ny lakandranon-tsambo rehetra efa vita mialoha mba hahafahanao miasa tsara ivelan'ny boaty. Miaraka amin'ny bara hidinay izahay amin'ny alàlan'ny fifangaroana sary miady amin'ny sary. Ny hidinay rehetra dia manana molotra na miondrika hiantohana ny fikosoham-bary atsahatra eo ambonin'ny hazo, mampihena ny loza mety hitranga amin'ny alokaloka ary manamora ny fanaovana sary hosodoko.
Karazan-tserasera maro amin'ny rindran-tsambo Stretcher
Tokony hohodidinina somary boribory kely ny mombamomba ny profil Manana tombony telo izy: - Mamela ny frera hahita sy mahazo ny sisiny mazava amin'ny sary izay misy sisintany mazava tsara - Mamela ny sarety kanadiana «mihodina» ny mombamomba azy fa tsy manakaiky ny sisiny maranitra izay antony lehibe mahatonga ny fikorontanana kanvas. .
- Mampitombo ny faritry ny faritra ihany koa izy io, izay mampihena ny lozabe miaraka amin'ny kanana. Amin'izay dia hanamora kokoa ny hisintona ny kanvas izy io ary hampianarina azy bebe kokoa.
Betsaka ny mombamomba ny rindrina barika fanitarana, sy ny fomba maro samihafa amin'ny fanendahana ny kitay. Noho izany tsy azo atao ny miteny hoe "fenitra". Betsaka koa ny fahasamihafana misy eo amin'ny faritra sy ny fanapahana ny hazo, noho ny antony ara-tantara. Noho io antony io ihany, ny kitay nampiasaina tamin'ny fanaovana barzo famatarana dia tsy mitovy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena miankina amin'ny ala izay misy. Fa ny ankamaroan'ny mpandoto, hialana amin'ny ady dia vita amin'ny pinewood Nordic maina tsara avy any Scandinavia, Russia ary Canada.
Fomba iray hafa ahafahana manatanjaka ny barazo amin'ny alàlan'ny fampidirana lakroa. Torohevitra fa ny halavany mihoatra ny 40 "na 1m dia apetaka amin'ny brace cross. Amin'ny fanaovana izany dia miantoka ny hazo tsy hihalefona ary hihantona.
Ny fampiasana ireo bara mihinjitra eo amin'ny tsenon-trano fanontam-pirinty dia mihamalaza amin'ny fanaovana pirinty kanvas vita pirinty ho malaza kokoa ao an-trano. Nanome fahaterahana indray ity teknika taloha nampiasaina teo amin'ny tsenan'ny zavakanto nandritra ny taona maro.
Na dia mampiasa canvases tsy misy fangarony aza ny mpanakanto eo amin'ny sehatry ny zavakanto. Ireo baran-tsatoka dia ampiasaina koa amin'ny famoahana sary rehefa mihetsika ny framers ho toy ny lobaka fanatanjahantena sns .. Ireo bara presret dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana teaterika ho an'ireo fitaovana miverina mametafeta. apetaho eo ambonin ny ravina fandoroana izy io. Amin'ny alàlan'ny famafazana ny kanadiana manodidina ny rindran-tsary, fantatra amin'ny anarana hoe fonosana galona, ​​dia afaka manantona ny sariny eo amin'ny rindrina ny mpaka sary, efa vita.
Mifandraisa aminay anio ary hasaina amin'ny kaontinao ny iray amin'ireo manampahaizana momba ny varotra ary hifandray aminao tsy ho ela, vonona hanampy anao amin'ny fanontaniana na fangatahana.
Andao hamorona sanda manatsara ny fifaninanana.
Oil Painting , filanjana-ponja , Contemporary Oil Painting , diloilo hanao hoso-doko amin'ny lamba , Abstract solika hanao hoso-doko , -tanana solika hanao hoso-doko , ny rehetra Products